Ọ dị njọ ihi ụra na TV? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ihi ụra na telivishọn na - nzaghachi nye nsogbu
Ihi ụra na telivishọn na - nzaghachi nye nsogbu
Ọ dị njọ ihi ụra na TV?
Ọtụtụ ndị na-achọpụta nke ahụna-ehi ụranaTV na-agbanyena-enyere ha akahie ụra. Agbanyeghị, ndị ọkacha mara kwenyere na nke a abụghị ezigbo echiche.Ihi ụranaTV na-agbanyeeme ka ekpughere gị gaa n’acha anụnụ anụnụ, nke nwere ike ibute ihe ize ndụ gị maka oke ibu, ọrịa shuga, na nsogbu ahụ ike ndị ọzọ.Ọnwa Ise 3, 2021
Maka ụfọdụ, ọ bụ naanị emume a na-eme n'abalị, ka Veikkaus Jain MD, ọkachamara n'ihe gbasara ọgwụ ụra na Northwest Medicinecentral DuPage Hospital dị na Illinois, mana maka ndị ọzọ, ha na-ahụ mkpọtụ azụ ma ọ bụ kwuo na ọ na-enyere ha aka ihi ụra, mana ọgụgụ isi sayensị dịnụ ugbu a, O yiri ka ọ bụ ngwakọta ngwakọta ngwakọta e bipụtara na magazin Ahụike havra Ahụhụ na-achọpụta na iji usoro mgbasa ozi nke ụdị ọ bụla bụ enyemaka ụra, ebe ịntanetị ọzọ jikọtara njọ na-ehi ụra ma ọ bụghị nke m Dị ka Chris Brandtner si kwuo, onye nkuzi sayensị ụra gbaara ụra na-ehi ụra , iji ya n'ihu telivishọn na-akwalite adịghị ọcha ụra ụra. Agbanyeghị, enwere ike ịrụ ụka na ịme nke a nwere ụfọdụ mmetụta dị mma n'okporo ụzọ na-emebi uche jam nke na-eme ka ị mụrụ anya - ụda mkpọtụ nwere ike inyere gị aka ịrahụ ụra ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị gbanye olu dị oke elu iji mebie echiche ndị na-emetụta ịgba ọsọ gị. n'uche ma ọ bụghị oke oke nke na ọ na - egbochi ahụ gị ịbanye n'ọnọdụ ụra nke na mkpọtụ gbara ya gburugburu nwere ike inye aka belata oge ọ ga - ewe ihi ụra, Dr.
Jane + Gụgharia ihe omume TV ma ọ bụ ihe nkiri ị hụrụ ọtụtụ oge nwere ike inye echiche nke ịmara na nkasi obi, na-ebelata ohere nke ịkpalite ọhụụ ọhụrụ, nke dabara adaba, nke ga-eme ka ị mụrụ anya na-ejide, Dr. Jane Nke a bụkarịrị ikpe mgbe ihe ị na-ele anya dị mfe. Chee sitcoms ma ọ bụ akara ihe nkiri3 Ihe ndekọ dị mkpa dị mkpa, mana enwere ike imebi ya Ọ bụrụ na ị dinara TV na TV, ọ pụtara na ị na-asa ahụ na ọkụ eletrik na-acha anụnụ anụnụ, nke nwere ike imetụta ogo ụra gị site na-akpata mmepụta nke melatonin, homonụ ahụ, nke na-eme ka ụra gị / iteta n'ụra wee nwee ike igbu oge ihi ụra, oge ọ na-ewe iji hie ụra, ka Dr.
Jane n’etiti ntopute nke ihuenyo ahụ na ikekwe na ihe niile na - esote nwere ike bụrụ ọdịnaya na - akpali akpali nke nwere ike ịdịgide n’ụra oge ụra, na - eduga n’inwe ezumike n’eme ụfọdụ ọrụ mmezi ahụ ka ị na-ehi ụra dịka ihe atụ, ime ka ncheta na ịgwọ ọrịa ike dịkwuo mma iji bulie omume ihi ụra tupu ị lakpuo ụra nwere ike ibelata mmetụta na-adịghị mma nke ikiri TV na ezigbo TV, ma ọ bụrụ na ịnwe ekwentị mbadamba ụrọ n'ihu ihu gị nwere ike belata oke ọkụ ọkụ ekpughere gị, ka Brandtner na-ekwu. Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ ịgbanye ihuenyo wee nụ ụda ahụ. Kwụsị njirimara autoplay nwekwara ike inye aka melite ogo ụra.
Ọ na-ebelata ohere ihi ụra gị ga-enwe nsogbu site na ọkụ na-enwu enwu na mgbanwe ụda n'oge oge na-enwu gbaa - ọbụlagodi ịga nke ọma iji tọọ TV gị iji gbanyụọ na-akpaghị aka maka oge iji gbanyụọ ọkụ mgbe ị gachara ụra, Jide n'aka na ị dabereghị na telivishọn, ebe ọ bụ na enyemaka ụra nwere ike ime ka mkpakọrịta dị n'etiti ikiri telivishọn na ihi ụra sikwuo ike na-enweghị ime ka o sie ike ihi ụra na-enweghị ya, ka Dr. Jane na-ekwu ọkachasị gburugburu ebe ị na-agaghị enwe ohere n'oge Otu ụzọ i nwere ike isi mee nke a bụ iwetulata igwe onyonyo gị.
Jiri Yourlọ Ọrụ Ohere ofnweta Ezigbo ụra n'abalị n'agbanyeghị gburugburu ebe obibi gị oonụrụ ụra ga-ebelata akara ala N'iji TV gị dị ka enyemaka ụra nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ kachasị mma iji kwalite ịdị ọcha ụra, mana ọ bụrụ na ihe ọzọ bụ enweghị ụra zuru oke Ọ nwere ike ịdị mma karịa ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa nyocha ọzọ iji mara iji jide n'aka, dị ka nchekasị na enweghị ike ime ka echiche dị jụụ dị. Otu n'ime isi ihe mere ndị mmadụ ji enwe nsogbu ihi ụra bụ ihe doro anya na mgbe telivishọn bụ nke ha na-enyere aka mee ka obi dị gị mma, ị nwere ike iji ya dị mfe ịrahụ ụra, ka Brandtner na-ekwu, na okwu ndị ọzọ, iji mee ka Netflix dị jụụ na n'ezie Ahụike nke Isi Iyi ahụ ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịkekọrịta ihe ị kwuru n'okpuru ebe a na Health Health channel na-ekere òkè n'isiokwu a Ndị enyi gị na ndị ọzọ
Gịnị ka ọ pụtara mgbe gị na TV ga-ehi ụra?
Brainbụrụ gịbuọ bụghị naanị ịchọpụta ìhè na ụda, ọbuna-ahazi ozi niile nkebuna-anata, nkepụtaranakedu ihe ọ bụnaTV bụa na-enyocha ya site na ụbụrụ. Nke ahụbumere mgbe ụfọdụ na-egosi nabunaTVmgbeị na-arahụ ụrana-abanye n'ime nrọ gị.Eprel 16 2020
Ndewo ndi be anyi, abum Bob Schrupp physiotherapist, Brad Heineck physiotherapist, anyi nile bu ndi physiotherapists a ma ama na ntaneti N’uche anyi, n’ezie, Bob. Taa, Brad, anyị ga-ekwu maka ọnọdụ ụra abụọ. Kwesịrị izere, nke a bụ isiokwu dị m mma, isiokwu dị ugbu a, n'ihi na ị maara na ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịghara ihi ụra, na-eteta n'etiti abalị, ihe mgbu enweghị ike ịlaghachi ụra, na-eche ihe kpatara gịnị ka ị nwere ike eme banyere ya ime? Anyị nwere azịza ya na Brad na m gafere oge nchekwa oge, mgbanwe mgbanwe, yabụ anyị nwere ụra ụra otu awa.
Ana m agwa gị, ọ na-atụ m ụjọ n’ụbọchị ụnyaahụ. Ana m amalite iwepụ ya. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na ọwa anyị, biko were nke abụọ iji denye aha anyị, anyị na-enye isiokwu gbasara otu ị ga-esi nwee ahụike na-adịghị mma ma bulite ha kwa ụbọchị.
Gaa na Facebook n'ihi na oburu na imara Brad na mu ma obu Brad na mu, gini bu Brad na mu? Anyị abụghị ndị isi Bekee, mmadụ ga-agbazi anyị na nke aEghara ịrịọ arịrịọ ka anyị ga-arịọ gị ka ịdenye aha anyịDị ka ịdenye aha na ịdenye aha ọ bụla. Soro anyi ihe obula ichoro ime gini bu uzo ura abuo a, Brad? Ọ dị mma, Bob, ọ dịghị mfe. Anyị enweghị ike ịsị emela ma emela nke a.
Anyị kwesịrị inye ha ihe kpatara ya. Anyị nọ ebe a iji mee ka ị mara ntakịrị nke mere na ozugbo ị gụrụ akwụkwọ, ị ga-aghọta, mgbe ahụ, enwere amamihe niile. Achọghị m ka m banye na nke ahụ mana mpaghara kachasị bụ na mkpesa anyị banyere mgbu bụ olu, ubu na azụ, ndị a nwere ike bụrụ mpaghara kachasị na-ewe iwe ma na-egbu mgbu n'abalị ka anyị wee lekọta ya na kwuo ya ma ghọta ya, agbanyeghị nkwonkwo n'ozuzu ya, ma ọ bụ nkwonkwo nke spain ma ọ bụ ubu ma ọ bụ azụ gị ma ọ bụ ihe ọ bụla, ikekwe olu gị.
Chọrọ ịnọ na ebe anyị na-akpọ ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa. Ma ọ bụ laghachi ebe a ga-abụ ebe njedebe, yabụ na agaghị m ehi ụra otu ahụ, olu ziri ezi ma ọ bụrụ na anyị etinye olu anyị n'otu akụkụ dị ka nke ahụ. A na-agbanye nkwonkwo gị niile n'olu gị na mpaghara njedebe anyị na-akpọ na nke ahụ bụ obere oge site na mbido dị ka ọ bụghị nsogbu, mana ị na-emechi olu gị n'ihi na ọ ga-adị iru ala maka minit 20 ma ọ bụ karịa.
Cheta na ihe ọzọ anyi chọrọ ime bụ ileba anya na spain, ọ bụghị naanị ile ya anya, mana ịghọta na ọkpụkpụ azụ na-agagharị ma ọ bụghị, mana anyị chọrọ idobe ya na nnọpụiche, Bob, yabụ a anọpụ iche ọnọdụ bụ n'ezie n'ebe ahụ, ebe enwere obere mgbada na azụ ebe a enwere gbagọrọ agbagọ n'ụzọ ọzọ ka anyị wee gbagọrọ agbagọ gbagọrọ agbagọ n'ụzọ ziri ezi yep debe ndị ahụ gbagọrọ agbagọ n'ụdị izugbe ahụ anyị agaghị aga ebe dị anya pụọ ma ugbu a ọ bụrụ na ị na-ele ya anya site na ihu na-achọ ịkwụ ọtọ, lee akụkụ ahụ anya n'akụkụ nke ahụ na-ele ogologo. Nke a niile ga-abịa igwu egwu mgbe anyị lelee ọnọdụ anyị mgbe anyị na-ehi ụra. Ọ na-efu ihe? Mba, ị mere ya otu ugboro.
Ọfọn ọ na-eme. Anọ m na-agụ akwụkwọ n'abalị ụnyaahụ. Yabụ ọnọdụ mbụ bụ na anyị na-ekwu maka ọnọdụ dị nfe.
Lgha ụgha na afọ gị Ya mere, nke ahụ bụ ọnọdụ dị njọ. Nke a bụ ọnọdụ n'ihi na ọ na-emebi ọtụtụ iwu. Anyị kwurịtara banyere ihe mgbu na-eme ka ị pụọ na nnọpụiche a ma ọ bụ banye na njedebe.
Mgbe m dinara ebe a, anyị na-ewere ohiri isi oge niile Bob Ma enwere ndị na-arahụ ụra ma ha nwere obere oge ma ha nwere ike ijikwa ya Mana nsogbu nwere ike ibute mgbe ị nọ n'afọ gị, ị ga-enwerịrị nwere isi gị n'ebe ahụ, anọ m ebe ahụ dinaa ogologo oge ugbu a. Echere m na ndị na-ehi ụra dị ka nke a enweghị ihe mgbu n'abalị niile, tụgharịa isi ha n'aka nri nyocha nyocha nke oge a n'otu oge na klaasị anyị jụrụ etu ọtụtụ ndị mmadụ nwere isi ọwụwa, otu narị pacenti ndị nọ na afọ ha nwere isi ọwụwa ụbọchị niile ma ọ bụ izu, ihe ị ga-echeta bụ na ọ bụrụ na ị nwere isi ọwụwa a kachasị amalite site na azụ ebe a, ị maara mgbu olu nke ahụ bụ otu n'ime ihe m ga-eleba anya na echere m na ọ bụrụ na ị bụ onye na-ehi ụra nke ọma, ị nwere ike ma ọ bụ ghara inwe ohiri isi, echere m na-enweghị ohiri isi n nwere ike itinye gị n'ọnọdụ na-anọpụ iche mana ị ka maara ma ọ bụrụ ị nwere ike izere ọnọdụ dị nro maka olu gị ọ ga-aka mma, na mgbe ahụ ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị dinara na afọ gị yana ubu gị mgbe ị na-edina otu ahụ, nke ahụ na-ewetara gị ubu gị na mpaghara ngwụcha, ọ na-ewetakwa brachioplexus gị, enwere ike iwepụ ha ma mebie mgbasa ahụ ogwe aka gị ma ọ bụ tuo irighiri akwara ma ị nwere ike ibilite na nhụjuanya ma ọ bụ tingling Ozugbo m tetere ụra, ogwe aka abụọ na-akụ ma m gbalịrị gbanyụọ mkpu Ya mere, lee ụzọ m si eme ya Ọ bụ obere ihe ihere na nke ahụ bụ.
Imaara na onwere aha umu igbo a. Kedu ihe bụ nke a? Mgbe ị na-ebuli aka gị elu otu ahụ wee rụọ ọrụ n’elu, n’aka, gịnị bụ ya? Enweghị m ike icheta, amaara m na enwere ọrịa honiimuunu ebe ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye gị hie ụra na ogwe aka gị wee daa, mgbe ahụ ọnọdụ ọzọ, Bob. Aga m eche banyere ya n'otu oge, ọ dị mma, n'ụzọ, ma eleghị anya nke ahụ bụ ihe dị mma.
Akụkụ dị n'akụkụ niile bụ ọtụtụ ndị m na-eme onwe m, mana ọtụtụ mgbe nsogbu ubu na-apụta mgbe ị dinara n'elu ubu gị mgbe ị ghọrọ na nkwonkwo, mgbe ị zuru ike ị nwere ike ịme nkwonkwo ubu nke nkwonkwo nkwonkwo ma ọ bụ n'ezie ọkụ na-apụ apụ ma nwee ike itinye nrụgide na akwara na capsule wdg na ubu gị ma kpatara mgbu Achọrọ m iwepụ ubu a ntakịrị, yabụ ọ bụrụ na ị bụ ntakịrị ntakịrị n'akụkụ ebe a, ị ga-enwetakwu akụkụ anụ ahụ. nke ubu na nke na-aghọ na yinggha n'akụkụ nwere ike ịbụ nsogbu, mana mgbe ị na-eme obere twerking ahụ anyị na-ekwu maka ya, ihe ọzọ nwere ike inyere gị aka mgbe ịnọ n'ọnọdụ a, ihe ọzọ bụ na azụ gị sags ntakịrị, mgbe ị nọ n'akụkụ ahụ Ee, ka anyị mee ka ọkpụkpụ azụ gosi na ya mere, ị nọ ebe a, amaara m na ọ kwụ ọtọ ma ugbu a, ọ ga-sagaa ntakịrị ebe a na obere ala gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu azụ ọkachasị ma ị ihi ụra nke ukwuu oge niile ị kwesịrị ịdị ka nke Weta towel rolls lik e anyị mere ebe a ma ị nwere ike itinye ya n'ọnọdụ ahụ ma ọ bụ na enwere mpịakọta ihi ụra ị nwere ike ịzụta - anyị nwere ha na ngalaba Amazon anyị site na McKenzie ma ị nwere ike kee ndị a n'úkwù gị nke mere na ha nọ n'azụ gị bụ mgbe ị na-ehi ụra n'azụ gị ma ọ bụ na ọ nọ n'akụkụ gị mgbe ị na-ehi ụra n'akụkụ aka nri m N'okwu m, amaara m na m nwere ike ihi ụra n'akụkụ m ihe dịka nkeji 10 Enweghị m ike ịrahụ ụra n'ihi na azụ m na-amalite imechi ihe mgbu, mgbe ahụ ga-abanye m n'azụ Ma nke ahụ bụ n'ihi m spondylolisthesis Ya mere, ọ bụ otú o si arụ ọrụ, nke a bụ obere ntakịrị maka m ebe a Ọ naghị agbanye gburugburu, mana ndị nwere nsogbu diski na-ejikarị ihe dị ka nke a ka ha wee nwee Nkwado dị na ala ala ha na mpaghara lordotic ma ọ bụrụ na ị tụgharịa n'akụkụ abụọ, ị nwekwara mpaghara oghere a iji jupụta. Enwere ụzọ ọzọ, Brad ebe a, na mgbakwunye na ị pere mpe maka gị, eriri gị nwere ike ịbụ buru oke ibu maka nke ahụ. Eeh.
Ebe ị na-aga. N'igosipụta ohere a, ànyị ga-egosi ha aghụghọ ohiri isi? Ee, ka anyị mee nke ahụ. Ka sere a.
Nke a bụ ohiri isi olu ebe a mana nhọrọ ọzọ, m ga-etinye nke a n'akụkụ a, Brad naanị maka ebumnuche m ebe a ka ị wee mara mgbe ị nọ n'akụkụ gị, mgbe ị nọ n'akụkụ gị ịchọrọ a thicker one Pillow Ka olu gị ghara ịga otu a, ịchọrọ ịpụ ya mgbe Brad agaghị aga n'ụzọ ahụ, ị ​​chọkwara olu gị kpọmkwem n'etiti etiti Nke ahụ dị ntakịrị, ị ga-agbago n'ezie ntakịrị, mana igodo nke ọzọ, Ihe anyị gosipụtara ọtụtụ oge bụ na ị na - ewerekarị ohiri isi gị .Ọ dị ka ohiri isi ịtụfu na nke ahụ bụ ihe m ji ma m mepụta obere ọwa ebe a, yep, na gị nwere ike itinye ogwe aka gị aka ebe ahụ, ma ugbu a, ọ bụghị nrụgide dị n'ubu gị ka ọ dị na mbụ, ya mere, nke a bụ sideline nke na-eme ka a na-anabata ya ma na-anakwere iji mee ka ubu mgbu ghara ịkpọte gị ma ugbu a mgbe ị na-a smụ ores dị n'ubu a ma ị chọghị ịgha ụgha na ya, nke ahụ dị mma Mgbe ahụ ị ga-anọrịrị n'akụkụ canal mgbe ị nwere ike ọ gaghịdị achọ ọwa mmiri ahụ, mana ị ga-etinye ohiri isi ebe a na ohiri isi ọzọ ebe a na nke ọzọ na-akwado ya ma na-ewetakwa ubu a n'ime ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa ahụ Brad na-ekwu maka ya. ọ bụghị ebe njedebe ma ọ bụ obere obere Ọ naghị agabiga ahụ, nke jọrọ njọ, ọ dị mma, n'ihi na ị gafere n'akụkụ ahụ, ebe a n'etiti.
Nke ahụ bụ ebe ịchọrọ idebe ya, ọ ga-eme nke ọma na ihe ikpeazụ bụ na ọ dị n’akụkụ ya. Ọtụtụ mmadụ ga-enweta ohiri isi dị ka nke a nke nwere ọdịdị ma ọ bụ ụfụfụ ebe nchekwa ka ọ na-agbanye ma enwere oghere maka olu ziri ezi maka itinye olu ya n'ọnọdụ na-anọpụ iche na nke ahụ adịghị mkpa , You nwere ike iji ohiri isi oge niile na ụfọdụ ndị ị maara na m ga-eme ka ụfọdụ ndị nwalee mpịakọta nhicha ahụ iji mejupụta oghere ahụ iji nweta ọnọdụ na-anọpụ iche n'olu ma ọ bụrụ na m na-edina ebe a na nke ugbu a Lee otu o si Nke a dị ezigbo mma, ee, ọ bụrụ na nke ahụ na-arụ ọrụ, mana ọ bụghị ezigbo ntụsara ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ itinye ego na ụfụfụ ebe nchekwa, nke na-efu ihe Ma ọ bụ enwere Ee, enwere ọtụtụ ihe iji mee ka ahụ dị gị mma, McKenzie na-eme ọkpụkpụ azụ ebe a anyị nwere ike itinye ya ebe ahụ, ma ọ bụrụ na ị f Jide n'aka na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma Ma ị chọghị iji akwa nhicha oge niile, ị nwere ike ịga n’ihu wee nweta otu n’ime ndị ahụ, kedụ ihe ọ bụ? f nakwa na-agbakọta, anyị nwere ọnọdụ abụọ iji zere ịgha ụgha, nke anyị enweghị azịza ya, yana ịgha ụgha n'akụkụ, nke anyị nwere ọtụtụ ihe ngwọta anyị gafere ugbu a, yabụ na ị maara na ọ dịkarịa ala na-enye gị enyemaka na ọkara ndị a, anyị amachaghị ọkara, ya mere daalụ maka ikiri
Ikiri TV tupu ị lakpuo ọ na-emetụta ụra?
Ikiri TV tupu ị lakpuo ụranwere ike bụrụ ụzọ nkịtị iji adaba onwe gịhie ụra, ma nke ahụ apụtaghị na ọ bụ agwa dị mma. Ihe ka ọtụtụ n'ime nchọpụta na-apụta na-egosi na oge ngebichi dị ukwuu, karịsịa nke ziri ezitupu ị lakpuo ụra,nwere ikena-adịghị mma mmetụta gịhie ụraogo. N'abalịIkiri TVna-akpaghasị elekere ime gị.Mar 10 2021
Omenala anyi adi ka odi ofu ututu. Akwụkwọ dịka Morning Morning na weebụsaịtị dị ka My Morning Routine nwere mmasị ịnya isi maka omume ọma nke na-eteta ụra n'isi ụtụtụ ma na-ewu usoro ụtụtụ siri ike nke nwere ọtụtụ ahụike dị ka ntụgharị uche. Na n'ezie itinye otutu butter na kọfị gị.
Ma gịnị banyere mgbede? Nke a bụ ihe ahụ, ọ nweghị ihe dị adị n'onwe ya na nke a bụ eziokwu maka ụtụtụ gị. Mgbe ị zuru ike na mgbede, mgbe ị na-enweghị akpachapụ anya mgbe ị na-alakpu ụra ma ọ bụ ihe ị na-eme n'abalị, ụtụtụ gị nwere ike bụrụkwa ụkọ ihe mara mma. Ya mere, lee ihe asaa ị kwesịrị ịkwụsị n'abalị n'ihi na ị nwere ike idozi abalị gị ma ụtụtụ gị ga-akawanye mma.
Nke mbu, kwusi i lakpuo oge na-adabaghi. Marakwa na ekwughi m na ị lakpuo ụra n’oge n’ihi na nke ahụ na-arụ ọrụ maka ụfọdụ ndị. Onye ọ bụla nwere usoro dị iche iche, nke bụ ọchịchọ siri ike nke ịda ụra ma teta n'oge dị iche iche. Peoplefọdụ ndị na-eme nke ọma, na-ehi ụra n'isi ụtụtụ, na-eteta n'elekere 4:30 nke ụtụtụ, ihe niile Jocko Willink na ụfọdụ mmadụ na-arụ ọrụ nke ọma ruo abalị wee hie ụra iji kwụọ ụgwọ ahụ.
Mana n'agbanyeghị oge ọ bụla, nke bụ eziokwu nye ọtụtụ n'ime anyị bụ na anyị na-anwa ibili n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ otu a, ịlakpu ụra n'oge na-ekwekọghị ekwekọ n'abalị ahụ tupu ebute ụra nke ekwekọghị ekwekọ. Iji dozie nke a, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọpụta ụra ole ị chọrọ. Ntuziaka National Sleep Foundation bụ ebe dị mma ịmalite, ị nwekwara ike iji ngwà dịka likera Ihi ụra iji chọpụta ụdị ihi ụra gị nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta karịa oge ụra nke dabara ma rapara na ya.
Kedu nke dị mfe ikwu karịa eme, ajụjụ a ga - abụ: ị na - arahụ ụra n'oge? Ọfọn, nke ahụ bụ isi ihe m na-achọ na-esote. Kwụsị ọrụ ndị bụ isi, ịrụ ọrụ, ịga ụlọ, gị na ndị enyi gị, ikiri ihe ngosi TV, igwu egwu egwuregwu isiokwu ogologo oge tupu ị lakpuo ụra. Na ahụmịhe m, nke a bụ isi ihe kpatara m ji etinye oge m ga-ehi ụra.
M na-egwu egwuregwu ederede ma ọ bụ na-ele ihe nkiri TV ma achọpụtara m na ọ na-eru ụra oge m, ma gwazie m na m nwere ike ịlakpu ụra mgbe m gachara. Enwere m ike ịbara onwe m ụra. Kedu nke bụ ụgha.
Enwere m ihe ọzọ m ga-eme tupu m lakpuo ụra. Ihicha ezé m, dozie ya, ihe ọma niile a, na nke ahụ na-eme ka oge m na-ehi ụra gaa n'ihu. Ya mere, ihe ngwọta ebe a bụ ịtọ oge ezumike.
Ọ dịkarịa ala minit 30 tupu ị lakpuo ụra. Nke a bụ ebe anyị kwesịrị ịkwụsị ihe ọ bụla ị na-eme. bido idina onwe gi na ihi ụra.
Mgbe ị dị njikere maka ihi ụra, ọ dị mma ịme ihe ọzọ ruo mgbe oge ihi ụra gị na-agagharị. Ikekwe ị na-akpọ ụbọ dị ka ọ masịrị m nwa oge, ma ọ bụ gụọ akwụkwọ, ma ọ bụ ikekwe lee TV. Enwere nyocha na-emegiderịta onwe gị na nsogbu nke ikiri telivishọn n'abalị, n'ihi ya, ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka gị, mana ihe ọ bụla ị họọrọ, ọ kwesịrị ịbụ ihe dị jụụ ma dị mfe idobe mgbe ọ bụ n'ezie oge ịbanye .
Nke ahụ na-ewetara m ihe nke atọ m na ndepụta ahụ. Kwụsị Thentanetị Beforentanetị Tupu Ihi ụra Ihi ụra Iji Mee Ka You Na-anọ Ogologo na Ogologo karịa Internetntanetị. N’ezie, ihe nkiri TV ndị riri ahụ pụkwara ịnwa ọnwụnwa, ma ọ dịkarịa ala tupu ịmalite ihe omume nke ọ bụla n’ime usoro ndị a, ị maara tupu oge eruo na ị ga-eji nkeji iri atọ ma ọ bụ otu elekere mee nke a ma ọ ga-ekwe omume iweda onwe gị ala.
Mana na Reddit na Twitter na Instagram na saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi ndị a niile, ọ dị mfe ịkwenye onwe gị na ihe niile ị ga - eme bụ pịgharịa gaa na nkeji ma ọ bụ abụọ wee laba. Mgbe oge izu ike gị gafere, ihe mbụ ị kwesịrị ịtụle bụ kọmputa gị gbanyụọ kpamkpam tinye ekwentị gị n’ebe ọ na-agaghị adọpụ uche gị. Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eji ekwentị gị dị ka ekwentị gị mkpu elekere, mgbe ahụ a kwesịrị a nso nyochaa kwa.
M na-ekwu na nke a bụ onye na-eji ekwentị ha dị ka elekere mkpu. Mgbe ị ruru ekwentị gị n'ihe ndina mgbe ị naghị ehi ụra mgbe ị kwesịrị n'ihi na ọ gbanye? Ichere abalị gị, mgbe ahụ ọ ga - abụ ezigbo echiche iji nweta elekere igwe elekere dijitalụ nke ochie ma debe ekwentị gị n'ime ụlọ dị iche. Ọ dị mma, na-esote, kwụsị ị drinkingụ ihe ọ cafụ cafụ caffeinated tupu ị lakpuo ụra, nke ga-abụrịrị oge mgbede.
Ka ọ dị ugbu a, eleghị anya ị maraworị na ị knowụ kọfị ma ọ bụ ihe ọ energyụ energyụ ike tupu ị lakpuo ụra na-emetụta ogo ụra gị. Mana nyocha egosila na ị cafụ caffeine ọbụlagodi elekere isii tupu ị lakpuo ụra nwere ike ime otu ihe ahụ n'isi okwu nke m ga-ekwu na njem gị nwere ike ịdị iche dịka m maara site na ahụmịhe nke onwe m na m nọ na 7: 00 pm.
Nwere ike ị drinkụ kọfị na 8: 00 pm ma rahụọ ụra n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịrahụ ụra ma ọ bụ teta n ’etiti abalị mgbe ụra ụra gị na-ata ahụhụ, wee belata nri caffeine gị n’ehihie. Ọ dị mma, nke ahụ nwere ike ịme ndị kọfị na ndị na-a andụ tii na-ajụ ihe m na-a drinkụ n'abalị? Ntụnye aka m bụ tii tii, nke na-abụghị tii ma ọlị n'ihi na tii na-enwekarị caffeine belụsọ ma ọ bụrụ na anaghị eri ya nke na-eme ka ọ dị njọ, mana enwere ahịhịa tii na-atọ ụtọ n'ebe ahụ na-atọ ụtọ ma enweghị caffeine. Ihe kachasị amasị m bụ ihe dị ụtọ vanilla n'akụkụ ebe a na-amụnye ọkụ na mmanụ bekee.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-enwekwa obi ụtọ iri nri chamomile, ebe ọ bụ na enweghị ọtụtụ ihe sayensị na-egosi na chamomile bụ ezigbo enyemaka ụra, ọ bụ n'ezie ihe ọ drinkụ drinkụ na-atọ ụtọ na nke ọma, nke ahụ dị mma maka ịrahụ ụra. Nke ahụ na-ewetara anyị ịkọwa ise, nke kwenyere na ọ dị obere na ihe ọ bụla dị na ndepụta a, mana achọrọ m iwere ya iwe ndina. Nke a bụ iwu m mere n'onwe m mgbe m malitere ịlụ enyi m nwanyị na ọ enyerela m aka kemgbe ahụ.
Echere m na ụzọ m si ahụ ya kwa ụbọchị bụ njem nke aka ya na achọghị m ịkwụsị njem a na ederede ọjọọ. Achọghị m ka m na-ewere ya iwe, achọghị m ka ọ na-ewere m iwe. Yabụ ọ bụrụ na m nwere ike ma nwee ike inyere m aka ma ọ dịkarịa ala ịchọrọ ịkọwa ọnọdụ ahụ, rịọ mgbaghara, n'ihi na mgbe mgbe, m ga-arịọ mgbaghara ma jide n'aka na mmetụta uche dị ntakịrị ma jụụ tupu anyị lakpuo ma enwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ na ya n'oge na-esote ụbọchị. pụọ n'abalị.
Mgbe m nọ mahadum, m mere nke ahụ ọtụtụ. Mgbe m bi n’ebe obibi, ana m echekarị elekere 9:00 nke ụtụtụ, mgbe ụfọdụ ọbụna elekere anya iri nke ụtụtụ. gaa mgbatị ahụ wee rụọ ọrụ wee gaa dinara ala.
Nke ahụ rụpụtara nke ọma maka m. Agbanyeghị, na oge ọzọ, na nke ahụ bụ otu ihe nwere ike ịdị iche kilomita gị, ọ bụrụ na ịmee, ọ nwere ike isiri gị ike iru ebe ahụ. Ihe kpatara nke a bụ na mgbatị ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme mgbatị ahụ siri ike, ma ọ bụ n'ezie, na-arụsi ọrụ ike, bulie ihu igwe gị dị elu, na okpomọkụ ahụ agaghị alaghachi na ọkwa nkịtị ruo oge ụfọdụ.
Na n'ezie, ihi ụra na-enwe ọnọdụ okpomọkụ dị elu, dịka onye ọ bụla hiri ụra n'ime ụlọ na-ekpo ọkụ mara, abụghị ihe kachasị mfe n'ụwa ịrahụ ụra, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwale ịmega mgbatị gị ruo ụtụtụ. Otu ihe m chọrọ ịmara bụ na ihe ndị dị ka yoga na ịgbatị ọkụ adịghị ka ọ ga-ewelite ọnọdụ ahụ nke ukwuu nke mere na ndị a dị mma nke ọma tupu ị lakpuo, m na-enwukwa ọkụ tupu mụ agaa Bed. Nke ahụ na-ewetara anyị isi okwu ikpeazụ na ndepụta anyị, nke bụ ijide n'aka na ị gaghị ahapụ onwe gị ọgbaghara iji kpochaa ụtụtụ.
Eleghị anya ị maara nke ahụ dịka m ma. Ọ dị mfe ịlakpu ụra ma gwa onwe gị na m ga-ehichapụ ihe ndozi na kichin ma ọ bụ oche n'ụtụtụ n'ihi na ị ga-enwe ike karịa mgbe ahụ. Ga-enwekwu oge.
Mana nke a bụ nsogbu. Ọ bụrụ na ị teta n'echi ya kama inwe ike ịmaba n'ime ihe omume ụtụtụ gị ma ọ bụ isi ọrụ ozugbo, gbanyụọ ntanye gị site na ịsachasị nsogbu gị n'abalị ahụ. Amaara m site na ahụmịhe m na nkwụsịtụ a na-agagharị na-enwekarị mmetụta na-akpata, na-eme ka ụbọchị m niile ghara ịmị mkpụrụ.
Kama, jiri ụfọdụ oge ezumike iji tọgharịa oghere gị. Kpochapu, dozie oche gị, mechie mmemme niile na kọmputa ahụ, mee ihe ọ bụla ị ga - eme iji mee ka ohere gị nwee ọrụ n'ụtụtụ echi ka ị nwee ike teta ma laghachite n'ihe ị na-eme n'ụtụtụ. Otu n'ime ndị a nwere ike iji ụfọdụ oge na mmalite nke ụbọchị gị na-agbasawanye ihe ọmụma gị.
Dịka anyị kwurịtara banyere Leonardo da Vinci na edemede m gara aga, ihe nwere ike inyere gị aka ịghọ ezigbo nsogbu nsogbu ma melite atụmanya ọrụ gị ịghọ mmadụ yiri T. Onye nwere ihe ọmụma miri emi na ọkachamara na mpaghara ụfọdụ akọwapụtara, yana ntọala sara mbara karị nke ihe ọmụma na-adabaghị adaba iji dozie nsogbu dị iche iche. Ebe dị mma ịmalite ịmalite ihe ọmụma ahụ bụ Curiosity Stream, nke nwere ihe karịrị 2,400 dị elu nke nwere ike ịmụba ihe ọmụma gị banyere sayensị, okike, teknụzụ, akụkọ ihe mere eme, na ndị ọzọ.
Gụnyere nke Stephen Hawking na Sigourney Weaver, mana ọ bụrụ na ịchọrọ nkwanye onwe gị, ana m akwado ịmalite site na akwụkwọ akụkọ a na-akpọ 'Order and Disorder', nke na-agbaso mgbanwe nke teknụzụ nkwukọrịta na otu anyị si ebufe ozi gburugburu ụwa. Nwere ike ịnweta niile a akwụkwọ maka naanị $ 2.99 kwa ọnwa, nke bụ n'ezie nnọọ oké ọnụ.
Ma ebe ọ bụ na ị na-ele ọwa m, ịnwekwara ike ịnweta ụbọchị 31 izizi gị n'efu site na ịga na curiositystream.com / Thomasand na koodu mgbasa ozi Thomas mgbe ị debanyere aha. Dị ka mgbe niile, nnukwu ekele gị na-aga Curiosity Stream maka ịkwado isiokwu a dị ka onye na-akwado ọwa m denye aha gị ebe ahụ ka ị ghara ịhapụ akụkọ ọ bụla n'ọdịnihu.
Ma pịa ebe ahụ iji nweta akwụkwọ m n'efu na Gra nweta akararịrị ka mma ma ọ bụrụ na ịnweghị, ma ọ bụ ị nwere ike ilele isiokwu ọzọ na ya ebe a, ma ọ bụ lelee ọhụụ ọhụụ kachasị ọhụrụ ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ihe ị maara maka ihe karịrị nkeji asatọ.
Ihi ụra na TV na-emetụta ibu gị?
Ihi ụra na TVon nwere ike imegịnwetaibu ibu, nnyocha mbido na-ekwu. CHICAGO - Na-ehi ụra ruo etiti abalịTVma ọ bụna-ehi ụrana ọkụ ndị ọzọ nwere ike ịgwakọtanke gimetabolism na idugaibu ibuenweta na ọbụna oke ibu, nchọpụta na-akpali agụụ mmekọahụ mana nke mbido US na-atụ aro.June 10. Dec 2019
Mgbe ị na-achọ ifelata, oke ụra ị na-ehi nwere ike ịdị mkpa dị ka nri na mmega ahụ. N'ụzọ dị mwute, nyocha na-egosi na ihe dịka otu ụzọ n'ime atọ tozuru etozu na-ehi ụra ihe na-erughị awa isii ọtụtụ abalị, nke na-ezughi oke na-egosi na ụra nwere ike ịbụ ihe na-efu maka ọtụtụ ndị na-agba mbọ ịkwụsị ibu. Lee ihe ise mere ị ga-eji hie ezigbo ụra ga-enyere gị aka ifelata.
Nke mbụ, ihi ụra nke ọma nwere ike ime ka agụụ na-agụ mmadụ. Ọtụtụ nnyocha achọpụtala na ndị na-ekweghị ụra ụra ekwuola na agụụ na-arị elu. O nwere ike ịbụ nke a kpatara bụ mmetụta ụra na-akpata na isi mmiri ọgwụ abụọ ahụ agụụ na-agụ; Ghrelin na leptin.
Ghrelin bụ homonụ nke ewepụtara na afọ nke na-egosi agụụ n'ụbụrụ. Ọkwa dị elu tupu nri, mgbe afo tọgbọ chakoo, na obere mgbe ị risịrị nri. Leptin bụ homonụ nke mkpụrụ ndụ abụba wepụtara na - egbochi agụụ ma gosipụta mmetụta nke njupụta.
Enweghị ụra zuru oke, ahụ na-emepụta ghrelin na obere leptin, nke na-eme ka agụụ na-agụ gị ma na-eme ka agụụ na-agụ gị. Nnyocha nke ihe karịrị otu puku mmadụ chọpụtara na ndị na-ehi ụra obere oge nwere 14.9% dị elu nke ghrelin na 15.5% dị ala nke leptin karịa ndị na-ehi ụra zuru oke, na ndị na-ehi ụra nwere nnukwu ozu anụ ahụ.
Nọmba nke abụọ: Ihi ụra na-enyere gị aka ịlụ ọgụ maka agụụ nri ma mee nhọrọ dị mma. Enweghị ụra na-agbanwe ụzọ ụbụrụ gị si arụ ọrụ. N’ihi ya, nke a nwere ike ime ka o sikwuoro gị ike ime mkpebi dị mma ma merie ọnwụnwa.
Nchịkọta nri ga-ebelata ọrụ dị n'akụkụ ụbụrụ ụbụrụ. Akụkụ ihu dị n'ihu maka mkpebi na njide onwe onye. Na mgbakwunye, ọ dị ka ebe ụbụrụ na-akpali akpali karịa nri mgbe enweghị ụra.
Tupu nke ahụ, mgbe abalị nke ụra na-ehi ụra, ọ bụghị naanị na nnukwu efere ice cream ga-aba uru karị, mana ọ ga-esiri gị ike ijide onwe gị. Nọmba atọ, ụra na-ehi ụra nwere ike ime ka ị na-eri caloric. Mmụba a nke calorie nwere ike ịbụ n'ihi ụba agụụ na nhọrọ nri na-adịghị mma, dịka m kwuru.
Nnyocha nke ụmụ nwoke iri na abụọ chọpụtara na mgbe ndị na-ehi ụra nwere naanị awa anọ na-ebute calorie 550 karịa, ma ọ bụ 22% karịa n'echi ya. E jiri ya tụnyere ụra ji awa asatọ. Otú ọ dị, uru calorie nwekwara ike ịbụ naanị n'ihi ya na oge ha na-amụ anya ma nwee ohere iri nri na-abawanye, ọkachasị mgbe oge ịmụrụ anya nọ na arụghị ọrụ dịka ikiri telivishọn.
Ọ na-eme ọtụtụ echiche, na-atụle na nnukwu akụkụ nke calorie ndị anyị na-eri dị ka nri nri abalị, yabụ ịlakpu ụra n'oge gara aga nwere ike iri calorie ole na ole. Nọmba nke anọ, sl eep nwere ike ime ka ọ dị gara gara. Enweghị ụra nwere ike ime ka ike gwụ gị n’ehihie, na-eme ka ị ghara ịdị na-emega ahụ́ ma na-enwekwu mmega ahụ.
O yikarịrị ka ike ga-agwụ gị ma ike gwụrụ gị n'oge mmega ahụ. Ozi ọma ahụ bụ na ịrahụ ụra nwere ike inye aka melite arụmọrụ gị. N’otu nnyocha, a gwara ndị na-egwu bọọlụ basketball ka ha jiri elekere iri na-ehi ụra kwa abalị ruo izu ise ruo asaa.
Ha gbasiri ike, oge mmeghachi omume ha ka mma, izi ezi ha toro, ike ọgwụgwụ ha belatakwara. Nke ise: Ihi ụra na-enyere insulin aka ka ọ ghara iguzogide insulin. Ihi ụra nke ọma pụrụ ime ka mkpụrụ ndụ bụrụ ihe na-eguzogide insulin.
Insulin bụ hormone na-ebufe shuga site n'ọbara gaa na sel dị n'ahụ gị ka ọ bụrụ ike. Ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ dị mma Ọ bụrụ na ị na-eguzogide insulin, ọtụtụ shuga na-adịgide n'ọbara ma ahụ na-emekwu insulin ka ọ kwụọ ụgwọ. Imebiga insulin na-eme ka agụụ na-agụ gị ma na-agwa ahụ ka ịchekwa calorie karịa abụba.
Iguzogide insulin bu ihe bu ihe mbu nke oria nke II na nke oria II N’otu nnyocha, emere ka umu nwoke 11 rahu ura ano rue abali isii. Mgbe nke ahụ gasị, ike ahụ ya wedata ogo shuga dị n’ọbara belatara site na 40%. Nke a na-egosi na abalị ole na ole ịrahụ ụra nwere ike ime ka mkpụrụ ndụ ghara ịna-egbochi insulin.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụra na-adịghị mma na-agbanwe ụzọ ahụ gị si emeghachi omume na nri. Na mgbakwunye na nri ahụike na mmega ahụ, ezigbo ụra bụ akụkụ dị mkpa nke ịnọgide na-ebu ibu. Daalụ maka ikiri.
Ugbu a, nye akụkọ a aka ma ọ bụrụ na ịchọtara ya ihe mmụta ma echefula ịdenye aha na YouTube Nutrition Authority site na ịpị bọtịnụ na-acha uhie uhie n'okpuru isiokwu a. (Music music)
Ọ bụ ahụike ka ụra na sọks?
Sọks. Na-eyisọksn'imebedbụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ụkwụ gị kpoo ọkụ n'abalị. Methodszọ ndị ọzọ dịka osikapasọks, karama mmiri ọkụ, ma ọ bụ blanket na-ekpo ọkụ nwere ike ime ka ị kpoo ọkụ ma ọ bụ gbaa ọkụ.Sraabụghị naanị uru iyisọksn'abalị.
Ọ dị njọ ịge egwu mgbe ị na-ehi ụra?
Ọ dị mma ịdaụra na-ege egwu, Breus na-ekwu, mana etinyela ntị ntị ma ọ bụ ekweisi ụra. Ha nwere ike iru ala, ma ọ bụrụ na ị tụgharịa na ntị ntị, ị nwere ike imerụ ọwa ntị gị. Kama nke ahụ, ọ na-akwado ndị na-ekwu okwu ohiri isi.
Gịnị mere ike gwụrụ m mgbe m dinara ala?
Ọ bụ otu n’ime nsogbu ihi ụra na-akachasị mma, ndị ọkachamara n’echekwa na ọ na-eme n’ihi na ihe dị n’ebe ị na-ehi ụra gwara ụbụrụ gị na ị na-edinakwesịrị“Kpalie” gị ma ọ bụ teta gị, kama itinye gị n'ụra. “Ọ bụrụ na mmadụ bụ ezigbo onye na-ehi ụra, mgbe ahụ kwa abalị ikekwe ha na-ehi ụra ma hie ụra.Bọchị 28 2017
Ọ dị njọ ihi ụra na egwu?
Ọ dị mmadaa n'ụrana-ege ntịegwu, Breus na-ekwu, mana etinyela ntị ntị ma ọ bụ ekweisi ụra. Ha nwere ike iru ala, ma ọ bụrụ na ị tụgharịa na ntị ntị, ị nwere ike imerụ ọwa ntị gị. Kama nke ahụ, ọ na-akwado ndị na-ekwu okwu ohiri isi. Ngwaọrụ ndị a bụ etu ha si ada: ohiri isi ya na igwe okwu dị n’ime ha.
Awa ole ka ị ga-akwụsị ile TV?
Nsogbuna-ehi ụran'abalị nwere ike ghara ịbụ ihe ọhụrụ dị kagị-eche - n'etiti 50 na 70 nde ndị America na-akọ ụfọdụ ụdịhie ụransogbu. Nnyocha na-atụ aro ịtụgharịTV(na eletrọniki ndị ọzọ) ma ọ dịkarịa ala minit 30tupu ị lakpuo ụrainyere akagịnweta ihe kacha mmahie ụrakwere omume.04.17.2020
Ọ ka mma ịrahụ ụra n'ọchịchịrị?
Ọchịchịrịdị mkpa ijihie ụra. Enweghị ọkụ na-eziga ahụ dị oke egwu na ahụ na ọ bụ oge ezumike. Ikuku ọkụ n'oge adịghị mma na-agbanwe ahụ 'hie ụrausoro ihe nile nke nduhie ụra-me cycles - n'ụzọ na-egbochi ma oke na ogo nkehie ụra.
Ego ole ka arọ gị na-arị elu n’abalị?
Kwa ụbọchịibu ibufluctuation bụ nkịtị.The nkeziokenyeibu ibuna-agbanweeluka 5 ma ọ bụ 6 pound kwa ụbọchị. Ihe niile na-agbadata n’ihe na mgbe ị na-eri nri, na-a drinkụ ihe ọ exerciseụ drinkụ, na-emega ahụ ma ọ bụ na-ehi ụraJul 31. Ọkt 2018
Gịnị mere ndị mmadụ ji arahụ ụra TV.
Ya mere, site na ihi ụra na telivishọn, ị nwere ike igbochi onwe gị ịghara ịrahụ ụra miri emi. Ka ị na-ehi ụra, ndị na-anabata ìhè n ’anya gị ka ga-enwe ike iburu ọkụ inyoghi inyoghi na telivishọn, ọbụlagodi dịka ha mechiri.
You na-ehi ụra na TV?
Ì Kwesịrị Fra withra na TV? Agbanyeghị, akụkụ ọzọ nke arụmụka ahụ nwere isi okwu ziri ezi, kwa. Dị ka National Sleep Foundation si kwuo, pasent 60 nke ndị America na-ekiri telivishọn tupu ị lakpuo ụra kwa abalị ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ abalị niile. Hà na-emerụ onwe ha ahụ?
Isnye bụ nwanyị ahụ ya na TV na-ehi ụra?
Aha nke abụ bụ “Ihi ụra na telivishọn,” ọ na-akọkwa akụkọ banyere otu nwanyị, Diane, onye o doro anya na Billy nwere mmasị na ya, mana - n’ihi egwu ọjụ ajụ - ọ na-eme ihere ịbịaru nso. Ka ọ dị ugbu a, ọ naghị eme ka ndụ dịrị ya mfe karị, ebe omume ya bụ 'Nwata nwoke, egbula oge m,' n'aha egwu ya maka itinye onwe ya.